Utshwala usula abahlinzeki - Isitolo esidayisa yonke impahla Utshwala usula Abenzi, Imboni
Ama-wipe angu-160 omkhiqizo owenziwe ngokwezifiso nge-canister 75% okusula utshwala
Kwenzelwe ukuthi kungabi nawo amakhemikhali abukhali, kepha kunzima kumagciwane! Zigcine uphephile ngokusula amagciwane namagciwane angadala izifo ezandleni ngesikhathi nangemva kokuba sezitolo, ezindaweni zokudlela, emahhovisi, emakilasini, ejimini, emakhishini, ezindlini, lapho usohambweni, nokuningi.
Ifektri ye-OEM umthamo omkhulu we-750 ubala izinhloso eziningi zokuhlanza ama-antibacterial wipes
Lokhu kusulwa kokuhlanzwa kotshwala kuqukethe i-75% yotshwala, engabulala amagciwane ngempumelelo, ibulale amagciwane, yehlise amagciwane esikhumba, futhi yenze izandla zakho zizizwe zihlanzekile, zihlanzekile futhi zingenaphunga. Lokhu kungukusula amagciwane okunobungcweti.
Ifektri ye-OEM OEM 80 esula isikhwama ehluza ama-75% okusula utshwala
Kwehlisa ngempumelelo amabhaktheriya angama-75% Utshwala obulala amagciwane kanye nokusula ama-antibacterial sanitizing